Imigomo Yokusebenzisa - I-Electronic Components Distributor - Components-Store.com
Ikhaya > Imigomo Yokusebenzisa
Lesi sivumelwano sichaza imigomo nemibandela ye-www. Components-Store.com, uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi!
Sicela ufunde lesi sigaba sokusetshenziswa nesitatimende sobumfihlo ngokucophelela ngaphambi kokuba ubhalise ku-Components-Store.com .ngokuba ubhalisiwe ngempumelelo, amamenyu owafundile, wavuma futhi wamukela yonke imigomo nemibandela ngokusetshenziswa komsebenzi nesitatimende sobumfihlo. sizoshicilela inguqulo ebuyekeziwe ku-Components-Store.com, uma sishintsha lesi sitatimende. konke okuqukethwe kwesivumelwano kuzoqala ukusebenza ngosuku lokushicilelwa. uma ungavumelani nalokhu kubuyekezwa, kufanele uqede ubuhlobo no-Components-Store.com.
1, UKUBHALISA USER:
Wonke umsebenzisi we-Components-Store.com kufanele abe yiNkampani noma umuntu ongasayina isivumelwano sokubophezela ngokomthetho ngaphansi komthetho. Sicela ungasebenzisi isevisi yethu uma ungafanelekile. Awukwazi ukudlulisa noma ukuthengisa i-akhawunti yakho ye-Components-Store.com. U-Components-Store.com unelungelo lokumisa noma ukumisa i-akhawunti yakho ngokuvumelana nezifiso zabo.
2), ukubhala izinto:
Bonke abasebenzisi kumele banikeze ulwazi lwangempela, oluvumelekile lomuntu siqu ku-Components-Store.com, ukuze baqinisekise ibhizinisi elijwayelekile. Uma kukhona ushintsho, sicela uzise futhi ubuyekeze ku-Components-Store.com ngokushesha.
Bonke abasebenzisi be-Components-Store.com bayavuma ukwamukela ama-imeyili nemilayezo evela kubalingani be-Components-Store.com noma i-Components-Store.com.
I-Components-Store.com inesitatimende sobumfihlo esetshenziswa kubo bonke abasebenzisi kubandakanya isivumelwano somsebenzisi. Kufanele ufunde futhi wamukele isitatimende sobumfihlo ukuze usebenzise i-Components-Store.com uma ubhalisa, futhi uzobe ukhonjelwe izinkinga ngokulawulwa (no-Components-Store.com noma iyiphi inguqulo ebuyekeziwe yezitatimende zobumfihlo) ngesikhathi se-Components-Store.com abasebenzisi.
1), Ngaphambi kokuvuma, mayelana nayo yonke imininingwane yomsebenzisi wedatha, igama langempela, ikheli, ikheli le-imeyli, imininingwane yokuxhumana..etc. Components-Store.com ngeke isetshenziselwe ezinye izinjongo.
2), Sebenzisa ulwazi olungelona lomuntu siqu. I-Components-Store.com izoqoqa ulwazi olungelona lomuntu siqu ngekheli le-IP, kufaka phakathi izakhiwo zesiphequluli, uhlobo lomsebenzi wesistimu, igama lesizinda se-ISP enikeza amasevisi okufinyelela, njll. Ukuze ukwandise ikhasi lesikrini sekhompyutheni. I-Components-Store.com yenza futhi izibalo zokugeleza komsebenzisi futhi ithuthukise ukuphathwa nenkonzo ngokuqoqa ulwazi olungenhla.
3), Ukuphepha kwedatha yomuntu siqu. I-Components-Store.com izovikela ulwazi lomuntu siqu ngemininingwane ephephile yokusebenzisa iseva.
4), ukudalulwa kwedatha yomuntu siqu kanye nomkhawulo. I-Components-Store.com izohlinzeka ngolwazi lomuntu siqu ngokusho kwesicelo somnyango wezomthetho noma ngenhloso yokuphepha komphakathi, lapho uhulumeni ecela i-Components-Store.com ukuthi idalule ulwazi lomuntu siqu ngokuhambisana nezinqubo zomthetho. I-Components-Store.com ayithathi umthwalo ngaphansi kwezimo ezinjalo. Uma uhlangabezana nalezi zimo ezilandelayo, i-Components-Store.com izosebenzisa ulwazi lomuntu siqu ngaphandle kwebala elidingekile: Sithole imvume yakho, imithetho kanye nezinqubo ezifanayo zicela i-Components-Store.com ukuhlinzeka ngolwazi lwemininingwane yabasebenzisi.
Bonke abasebenzisi uma ukuthenga kumele bahambisane nemigomo elandelayo:
1), Abasebenzisi kumele bahambisane nemithetho esebenzayo, imithethonqubo, imithetho kanye nesicelo semithetho yendawo lapho sebenzisa isevisi ye-Components-Store.com nokuthenga. Kumele uqinisekise ukuthi ugcine le migomo yokusetshenziswa kanye nesitatimende sobumfihlo kufaka yonke imigomo nemithetho yamaphepha angenhla.
2), Ubophezelekile ukuqedela ukuthengiselana nge-Components-Store.com uma uthenga, ngaphandle kwebhizinisi elivinjelwe ngokusetshenziswa nemithetho. Uma usubeke ama-oda, uzokwamukela imigomo nemibandela eqinile ekuchazweni kwezimpahla, uma nje lezi zimiso zebhizinisi zingokomthetho futhi ngaphansi kwalesi sivumelwano.
3), Ukukhangisa, uhlu lwamanani nezitatimende ku-Components-Store.com akuyona isipho. Kufanele sikhumbule ulwazi oluvela kolunye uhlangothi, lapho i-Components-Store.com ithola izinombolo zezingxenye kanye nama-POs kusobala ukuthi ayiphutha noma angaphandle kwesitokisi. I-Components-Store.com inelungelo lokuthenga ukuvinjelwa kwe-qty. Uma ubeka i-oda, uyavuma futhi ukuthi uneminyaka yobudala yokuthenga lezi zimpahla, futhi unesibopho sobuqiniso boke ulwazi olunikezile ngomyalelo.
4), intengo yomkhiqizo nokutholakala kuzocaciswa kusayithi. Lolu hlobo lwazi luzobuyekezwa nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Inkokhelo yokuthumela izoxazululwa ngokuhlukile ngokwezindlela ezahlukene zokuthutha ozikhethayo. Uma ngabe ezinye izingozi, isibonelo, umhlinzeki wenyuka intengo, izinguquko ze-VAT, noma iphutha le-Components-Store.com, zonke izizathu ezibangela ukubuyekezwa kwentengo emva kokuqinisekisa kwe-oda, i-Components-Store.com izofaka i-imeyili noma ifonele ukwazisa lolu lwazi, unganquma ukuthi ungakhansela umyalelo noma cha.
1), Bheka isevisi yokudayiswa.
2), ikhwalithi yemikhiqizo.
Imikhiqizo ye-Components-Store.com izobe ihambisane ngokugcwele namazinga kahulumeni nezokusebenza. Uma ngaphandle kwamazinga wangaphambili, sizokwenza ngokuvumelana nesilinganiso somkhiqizi, uma ngaphandle kwamazinga angenhla, amakhasimende angaxoxa futhi anqume phakathi kuka-Components-Store.com. Noma iyiphi inkinga yekhwalithi noma ngaphandle kwezindinganiso zemikhiqizo, abasebenzisi bangacela ukubuyela noma ukufaka esikhundleni.
5, ISEBE SOKUPHEPHA:
Uyokwamukela ukuthi awukwazi ukungena kuwebhusayithi nganoma yiluphi uhlobo lwe-robot, isofthiwe ye-Spider noma ye-Refresh nganoma iyiphi injongo ngaphandle kwemvume ye-Components-Store.com kufomu lokubhala.
1), Noma yikuphi ukuziphatha okungenangqondo nokungaziphathi kahle okungaphumelela kuwebhusayithi ye-Components-Store.com nge-(Components-Store.com ukucacisa ukucacisa).
2), Ngaphandle kwemvume yokubhala ye-Components-Store.com, ukuguqula, ukukopisha, ukudlulisa, ukwenza imisebenzi efunyenwe, ukusabalalisa noma ukubukeka ku-Iwebhusayithi (ngaphandle kolwazi lwakho lwangasese).
3), Interfere noma uzame ukuphazamisa ukusebenza kwe-website evamile noma ukucubungula izinyathelo kuwebhu.
4), Sebenzisa noma yikuphi okuqukethwe okuvinjelwe umthetho nemithetho ehambisanayo.
5), Sebenzisa noma yiliphi igciwane, ihhashi leTrojani, i-worm virus, i-timebomb, ikhansela i-bots, iqanda le-Easter, i-spyware noma enye uhlelo lwekhompiyutha engalimaza, ibukeze, isuse, imphumela embi, iyanqamule imfihlo, inkontileka noma inqunyelwe ukusetshenziswa kwanoma yiluphi uhlelo, idatha noma ulwazi lomuntu siqu.
6, ISITATIMENDE SAMALUNGELO ESIKHAYA:
Ilungelo lobunikazi, ilungelo lobunikazi, uphawu lokuhweba, imfihlo yezohwebo kanye nawo wonke amalungelo anikezwa yi-Components-Store.com wonke angabakwa-Components-Store.com. ngaphandle kwemvume ye-Components-Store.com, noma ubani noma ilungu angakwazi ukulanda, ukukopisha, ukudlulisa, ukubuyekezwa, nokuhlela. Ngaphandle kwalokho uzothatha yonke imithwalo yomthetho. I-Components-Store.com inelungelo lokukhumbula insizakalo yedatha ye-Components-Store.com uma umsebenzisi esebenzisa le nsizakalo.
I-Components-Store.com iphendula ukuthi inikeze ukwesekwa kwezobuchwepheshe ukuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi isebenza kahle, Zama ukugwema ukuphazanyiswa komsebenzi, noma ukuphazamisa isikhathi somkhawulo ngesikhathi esifushane, qiniseka ukuthi umsebenzisi angakwazi ukubhekana ne-intanethi ngokushelela. Kodwa ngenxa ye-force majeure noma ezinye izizathu azikwazi ukulawula, yenza ukuthi i-crash iwebhusayithi noma ayikwazi ukuyisebenzisa, kubangele irekhodi elithile, umlayezo noma ulwazi elahlekile, i-Components-Store.com ayikho ukukhathazeka: futhi noma yikuphi umsebenzisi anikeza umphumela ongalungile noma ongapheli futhi onamanga wokuthola ulwazi ukuhluleka ukusebenzisa isevisi ye-Components-Store.com noma ukuhlupheka kunoma yikuphi okulahlekelwayo, i-Components-Store.com ayikho ukuthethelela.
Lesi sivumelwano kuzo zonke izici silawulwa yimithetho ye-Hong Kong. Leli bhulogi bonke abasebenzisi bangabanikazi be-Components-Store.com abangenakulinganiswa nendawo etholakala enkantolo yinkantolo nasenkantolo ephakeme. Izinhlinzeko zalesi sivumelwano zihlukaniswa, Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalesi sivumelwano kubhekwa njengokungavumelekile noma ukungenakunyakaziswa, ukuhlinzekwa kungasuswa futhi izinhlinzeko ezisele zizokwenziwa.